သငျသညျအတနျးထဲမှာတစ်ခုအက်ဆေးတာဝန်ပေးအပ်နေသည့်အခါသငျသညျအကောင်းတစ်ဦး Starting Point သို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, ဖယောင်းဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ဖို့ခက်ခဲတဲ့ပါပဲ။ သေချာတာပေါ့, ရှိပါတယ် အထက်တန်းကျောင်းပိုကောင်းရေးသားဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီး , ဒါပေမယ့်သင်ကအခြေခံအကြမ်းဖျင်းကျွမ်းကျင်မနိုင်လျှင်, သင်တိုးတက်လာဖို့မသွားပါတယ်။ အဆိုပါငါးအပိုဒ်အက်ဆေး format နဲ့, (ကျိန်းသေမဟုတ်သင်အဘို့အသုံးပြုနေသောအရာကိုအခြေခံပေမယ့် Enhanced ACT အရေးအသားစမ်းသပ်ခြင်း ဥပမာအားဖြင့်,), သငျသညျအက်ဆေးအရေးအသားအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်စတင်ရန်ကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5စာကြောင်းများဖွင့်ကိုဖန်ဆင်းဤပထမအပိုဒ်, နှစ်ခုရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်:
မြေတပြင်လုံးအက်ဆေး၏အဓိကအချက် (စာတမ်း) ပေး
စာဖတ်သူရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရဖို့, သင့်ရဲ့ပထမဆုံးအနည်းငယ်စာကြောင်းသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးပါ ဖော်ပြရန်စကားလုံးများကို တစ်ခု သို့ရာတွင် တစ်ဦးဒီကဗျာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့မဟုတ်အတွက်စာဖတ်သူကိုဆွဲရန်သင့်ခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တကယ်တော့။ အတူသင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုလေ့ကငျြ့ ဖန်တီးမှုအရေးအသားညွန်ပြ ကာအက်ဆေးစတင်ရန်စိတ်ဝင်စားဖို့နည်းလမ်းတွေအချို့အတွေးအခေါ်များရဖို့။
သင့်ရဲ့အဓိကအချက်ဖော်ပြစေရန်, ကိုပထမဦးဆုံးအပိုဒ်၌သင်တို့၏နောက်ဆုံးဝါကျသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နိဒါန်း၏နောက်ဆုံးဝါကျကိုသင်တာဝန်ပေးအပ်ခေါင်းစဉ်ကိုစဉ်းစားသောအရာကိုစာဖတ်သူကိုပြောပြသင်အက်ဆေးခန့်ရေးလိုက်တာပေါ့သောအချက်များစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဤတွင် "သင်ဆယ်ကျော်သက်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှိသင့်ထင်ပါသလား" ခေါင်းစဉ်ပေးထားကောင်းတစ်ဦးနိဒါန်းအပိုဒ်ရဲ့ဥပမာကိုရဲ့
ငါတကျိပ်နှစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည်အစဉ်အဆက်ကတည်းကအလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်, ငါ, ငါ့မိသားစုဝင်တွေများအတွက်အိမ်များသန့်စင်ထားတဲ့ရေခဲမုန့်နန်းတော်မှာငှက်ပျောပြိုကွဲ လုပ်. , အမျိုးမျိုးသောစားသောက်ဆိုင်မှာစားပွဲစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ ကျောင်းကတစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသောတန်းအမှတ်ပျမ်းမျှအားတင်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းကျနော်လည်းအားလုံးကိုပြု၏။ ဆယ်ကျော်သက်ကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်များသူတို့ကိုသင်ပေးသောကွောငျ့အထက်တန်းကျောင်းများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှိသင့် စည်းကမ်း ကြောငျးအတှကျသူတို့ကိုငွေသားဝင်ငွေ, နှင့်ဒုက္ခထဲကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။
Grabber အာရုံစူးစိုက်မှုကို: "ငါတကျိပ်နှစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည်အစဉ်အဆက်ကတည်းကအလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ " တစ်ဦးရဲရင့်ကြေညာချက်မျိုး, ညာ?
စာတမ်း: "လူငယ်တွေရဲ့ကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်များသူတို့ကိုစည်းကမ်းသင်ပေးသောကွောငျ့ကြောငျးအတှကျသူတို့ကိုငွေသားဝင်ငွေ, အထက်တန်းကျောင်းများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှိသည်, ဒုက္ခထဲကသူတို့ကိုစောင့်သင့်ပါတယ်။ " စာရေးဆရာရဲ့ပြ အမြင် နှင့်, စာစီစာကုံးအတွက်လုပ်မယ့်အချက်များပေးပါသည်။
အပိုဒ် 2-4: သင့်အမှတ်ရှင်းပြ
သင်သည်သင်၏စာတမ်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြဖို့ရှိသည်။ လာမယ့်သုံးအပိုဒ်-ကိုယ်ခန္ဓာ၏အလုပ်သုံးပြီးသင့်ရဲ့စာတမ်းများ၏ရမှတ်ရှင်းပြဖို့အပိုဒ်-ဖြစ်ပါတယ် စာရင်းဇယား , အချက်အလက်များ, ဥပမာ, သို့ရာတွင်နှင့်သင့်ဘဝကနေနမူနာစာပေ, သတင်းသို့မဟုတ်အခြားအရပ်တို့ကို။
ဥပမာကိုမိတ်ဆက်အတွက်စာတမ်း "လူငယ်တွေရဲ့ကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်များသူတို့ကိုစည်းကမ်းသင်ပေးသောကွောငျ့ကြောငျးအတှကျသူတို့ကိုငွေသားဝင်ငွေ, အထက်တန်းကျောင်းများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှိသည်, ဒုက္ခထဲကသူတို့ကိုစောင့်သင့်ပါတယ်။ " ခံခဲ့ရ
အပိုဒ် 2: သင်၏စာတမ်းကနေပထမဦးဆုံးအချက်ရှင်းပြ: "အထက်တန်းကျောင်းများတွင်အလုပ်အကိုင်သူတို့ကိုစည်းကမ်းသင်ပေးသောကွောငျ့အနေဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှိသင့်သည်။ "
အပိုဒ် 3: သင်၏စာတမ်းကနေဒုတိယအချက်ရှင်းပြ: "အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကြောငျးအတှကျသူတို့ကိုငွေသားဝင်ငွေဖြစ်သောကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှိသင့်သည်။ "
အပိုဒ် 4: သင့်ရဲ့စာတမ်းကနေတတိယအချက်ရှင်းပြ: "အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒုက္ခထဲကသူတို့ကိုစောင့်သောကြောင့်, ဆယ်ကျော်သက်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှိသင့်သည်။ "
သုံးယောက်အပိုဒ်၏အသီးအသီးမှာကိုခေါ်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဝါကျ, ခေါင်းစဉ်ဝါကျ , သင်သည်သင်၏စာတမ်းကနေရှင်းပြနေတဲ့အချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ခေါင်းစဉ်ဝါကျပြီးနောက်, သင်သည်ဤအချက်ကိုစကားမှန်သည်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြ 3-4 ပိုပြီးစာကြောင်းကိုရေးပါမယ်။ နောက်ဆုံးဝါကျကိုနောက်ခေါင်းစဉ်ရန်သင့်အားပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။
ဤတွင်တူနိုင်သောအရာကိုအပိုဒ်2ဥပမာတစ်ခုဖွင့်:
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးမပဲ့ပြင်ဆုံးမသွန်သင်နေသောကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှိသင့်သည်။ ငါကိုယျတိုငျကိုငါသိ၏။ ငါရေခဲမုန့်စတိုးဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာငါအချိန်မှန်နေ့တိုင်းပေါ်လာခဲ့သို့မဟုတ်ငါပစ်ခတ်ဆည်းပူးခဲ့ကြပေသည်။ ငါ့ကိုဆုံးမသွန်သင် ပုံကိုတစ်ဦးအချိန်ဇယားကိုစောင့်ရှောက်ရန် , စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း။ တစ်အိမ်အကူကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ငါ့မိသားစုဝင်တွေ '' နေအိမ်များ၏ပြတင်းပေါက်လျှော်သကဲ့သို့ငါစေ့စပ်ဖြစ်သောစည်းကမ်းနောက်ထပ်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်, သိလာတယ်။ ငါသည်ငါ့အဒေါ်ငါ့ကိုပေါ်တက်စစ်ဆေးနေမည်ဖြစ်ကြောင်းသိတယ်, ဒါကြောင့်ငါကလုံးဝစုံလင်ခြင်းရှိ၏သည်အထိတာဝန်နှင့်အတူကပ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါကသူမအစားစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်အခါ, တစ်ဦးနုပျိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနေစည်းကမ်းတစ်တစ်တန်လိုအပ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအလုပ်အကိုင်များအတွက်ငါသည်လည်းငါ့အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကပြီးပြည့်စုံခဲ့ချိန်အထိတာဝန်အပေါ်နေဖို့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်မအလုပ်ကဆင်းကိုင်ပြီးကနေစည်းကမ်းဒီလိုမျိုးသင်ယူခဲ့ပေမယ့်တင်းကျပ် Self-ထိန်းချုပ်မှုငါသင်ယူတစ်ခုတည်းသောသင်ခန်းစာမဟုတ်ပါဘူး။
အပိုဒ် 5: အဆိုပါနိဂုံး
သင်မိတ်ဆက်စကားတိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အက, စာစီစာကုံး၏ကိုယ်၌သင်တို့၏အဓိကအချက်များကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီပြီးတာနဲ့ ဖက်ပြောင်း အသီးအသီးအပိုဒ်များအကြား Nice, သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးခြေလှမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် ကောက်ချက်ချ သည့်စာစီစာကုံး။ 3-5 စာကြောင်းများတက်လုပ်နိဂုံး, နှစ်ခုရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်:
ပြန်လည်စုစည်းမှုစေရန်, သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်စာကြောင်းသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစကားများ၌သင်တို့၏စာစီစာကုံး၏သုံးခုကိုအဓိကအချက်တွေကိုထပ်လောင်းအတည်ပြု, ထို့ကြောင့်သင်မတ်တပ်ရပ်ရှိရာစာဖတ်သူနားလည်သဘောပေါက်ထားပါတယ်သင်တို့သိကြ၏။
တစ်တည်မြဲစှဲထားခဲ့ဖို့, သင့်နောက်ဆုံးစာကြောင်းသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအပိုဒ်အဆုံးသတ်မတိုင်မီစဉ်းစားရန်တစ်ခုခုနှင့်အတူစာဖတ်သူကိုချန်ထားပါ။ သင်တစ်ဦးကိုးကား, မေးခွန်းတစ်ခုတစ်ဦးသို့ရာတွင်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဖော်ပြရန်ဝါကျကွိုးစားနိုင်ဘူး။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးနိဂုံးပိုင်း၏ဥပမာတစ်ခုဖွင့်:
ငါသည်အခြားမည်သူမဆိုအဘို့ကိုမပွောနိုငျသော်လည်းငါ့အတွေ့အကြုံကကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနေစဉ်အလုပ်ရှိခြင်းဟာအလွန်ကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်ငါ့ကိုဆုံးမသွန်သင်ထားသည်။ မသာအဲဒါကိုသူတို့ကောလိပ်ကျောင်းကျူရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်သူဌေးထံမှကောင်းတစ်ဦးထောက်ခံစာဘို့ပိုက်ဆံနဲ့တူအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုပေးနိုငျသညျ, သူတို့ဘဝအတွက် Self-ထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လူတွေကိုသင်ပေးပါဘူး။ သေချာတာပေါ့, တကအလုပ်၏ဆက်ပြောသည်ဖိအားမပါဘဲဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြစ်ဖို့ခက်ပေမယ်တဦးတည်းရှိခြင်း၌ရှိသမျှသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူကယဇျပူဇျောပါစေခြင်းငှါမလည်းအရေးကြီးပါတယ်။
တူသောပျော်စရာရေးသားခြင်းစီမံကိန်းများနှင့်အတူစာစီစာကုံး-ရေးသားခြင်းတွင်ဤခြေလှမ်းများအကောင်အထည်ဖော်အလေ့အကျင့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအရေးအသားညွန်ပြ ။ ပိုငျသလွယ်ကူအရေးအသားဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်စာစီစာကုံးရေးသားခြင်းအဘို့ဤရိုးရှင်းသော technique ကို, ကျင့်သုံးပါ။
ပြဇာတ်ရုံ Dream - အဆိုပါမိန်းမောတွေဝေလျက်ဆန်းစစ်ခြင်း
Virtual ဓာတုဗေဒစာသား: ယူနစ် & တိုင်းတာခြင်း
Valens နှင့် Adrianople ၏တိုက်ပွဲ (Hadrianopolis)
စစ်မဖြစ်မီနှင့်အပြီးနောက် Antebellum နေအိမ်အကြောင်း
Delphi နှင့်အတူ XML ကိုစာရွက်စာတမ်းများ, Creating parsing နှင့်ခြင်းမှာ
ငါးကတ် Draw Play လုပ်နည်း
တစ်ဦးကို tick Remove ရန်အဆိုးဆုံးနည်းလမ်းများ
Shri Adi Shankaracharya ပထမသျှမ်
Giordano Bruno: သိပ္ပံများအတွက်အာဇာနည်ဗိမာန်
စပိန်ကြိယာ 18 အမျိုးအစားများ
(တင်ဆက်ဖို့) "ပစ္စုပ္ပန်" များအတွက် conjugation Learn